Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sida oo Xukuno riday – Radio Daljir
Seteembar 22, 2018 1:13 g 0
Maanta oo taarikhdu tahay 22 Sept 2018 Maxkamadda Ciidamada qalabka sidda ayaa xukun dil ah ku riday Askari ka tirsan Ciidanka dowladda kaasoo nin Mooto Bajaajle ah ku diley Magaalada Beledweyne ee Caasimadda gobolka Hiiraan 27-dii Bishii lasoo dhaafay.
Dhinaca kale Askariga xukunka dil ah lagu riday ayaa lagu Magacabaa Maxamed Xuseen Siidow waxaa uu ka mid ahaa Ciidamada Booliska ee Gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada oo ku sugan Magaalada Baledweyne ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday Askari, waxaana uu sheegay in maxkamadda Ciidamada ay tilaabo ka qaadi doonto Cidwalba oo dhibaateysa Shacabka.
Xasan Cali Nuur Shuute Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida , ayaa sidoo kale sheegay in askariga xukunka lagu riday uu u furan yahay inuu qaato racfaan.
Maamulka degmadda Garoowe oo maamul cusub u samaynaya Xaafadaha Garoowe (dhegayso)